Cryptocurrencies काम हाम्रो बाटो परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ - Blockchain समाचार
Blockchain प्रविधि र cryptocurrencies पक्कै हामी संसारको हेर्ने तरिका परिवर्तन. वित्त, बैंकिङ, पहिचान र गोपनीयता तुरुन्तै र irrevocably Blockchain प्रविधि प्रभावित छन् क्षेत्रमा छन्. तर म पनि तिनीहरूले जस्तै काम हाम्रो बाटो को स्वचालन रूपमा डरलाग्दा हुन सक्छ भन्ने विश्वास गर्छन्.
Cryptocurrency कामदारहरूको लागि अवसर को संसार अप खोल्छ
पहिले नै शक्तिशाली blockchain प्रविधि र cryptocurrency हुन सक्छ कसरी बुझे हुन सक्छ जो मान्छे को एक समूह डिजिटल nomads छन्. डिजिटल nomads क्षेत्र बाँधिएको गर्ने छैन कामदारहरूको छन्. तिनीहरूले अक्सर यात्रा र एकै समयमा धेरै कम्पनीहरु लागि काम गर्न सक्छन् (वा कम्पनी बाँधिएको छैन). बस राख्न, तिनीहरूले सडक मा बस्ने फ्रीलांसरों को एक कर्मचारीहरु छन्, र म तिनीहरू किनभने cryptocurrencies बढी प्रचलित हुँदै गइरहेका छन् लाग्छ.
म यो विश्वास कारण एक तिमी बजार मुक्त गर्दा र धन स्वतन्त्र र मोबाइल बनाउन छ, एक ठाउँमा एक व्यक्ति बाँध्न कुराहरू धेरै भइसकेका छन्. यो अर्को उदाहरण anecdotal छ, तर यो मेरो आँखा खुलेको एउटा अनुभव थियो. जब म मेरो मालिक डिग्री पूरा पछि शिकागो लन्डन बाट फर्के, यो चार दिन मेरो अमेरिकी बैंक खातामा बेलायत बैंक खाता मेरो पैसा हस्तान्तरण गर्न लिए, र ती दिन को दुई को लागि, यो त खातामा थिएन. यो अनुभव अविश्वसनीय तनावपूर्ण थियो र म कुनै राम्रो तरिका हुन सक्छ त्यहाँ कसरी छक्क परे. यसलाई म मेरो Bitcoin र Dogecoin नै ठाउँमा अझै पनि थिए सम्झना छ कि म शिकागो फिर्ता पायो सम्म थिएन – तिनीहरू अझै पनि मेरो थिए. प्लस, म उनको मसँग सार्न प्राप्त गर्न एक शुल्क तिर्न छैन, र तिनीहरूले मेरो नियन्त्रण बाहिर कहिल्यै थिए. कि मलाई गहिरो बोध थियो, म बारेमा हराउने विशेष गरी विचार $ 50 कारण शुल्क र विनिमय दर गर्न.
Cryptocurrency संग, तिनीहरूले पैसा कहाँ छ थाहा गर्दा र नयाँ बैंक खाता सेट अप बिना तिनीहरूलाई यसलाई ल्याउन सक्छ रिमोट कामदारहरूको थप सुरक्षित हुन सक्छ. हाकिमहरूले साथै आफ्नो teleworkers भुक्तानी गर्न को लागि यो सजिलो बनाउँछ. सीमाहरु गएका छन्, कामदारहरूको सार्न मुक्त छन्, र फलस्वरूप, थप मानिसहरूलाई डिजिटल यायावर जीवन शैली गले – विशेष गरी रूपमा डिजिटल nomads लागि सबैभन्दा लोकप्रिय यात्रा गन्तव्यहरू धेरै एक procrypto वा गुप्त-सहिष्णु मनोवृत्ति लिन.
तिनीहरूले बंधक वा अन्य विशाल भौगोलिक दायित्व छ कम सम्भावना रूपमा यो साना पेशेवरहरुको लागि विशेष साँचो हुन सक्छ. तथापि, म यो केवल जवान मानिसहरू हुनेछन् भन्ने विश्वास छैन. मान्छे तिनीहरूलाई जीवनमा थप गर्न चाहनुहुन्छ कि यात्रा छ विचार, र हामी काम मा एक burgeoning प्रवृत्ति देख्न सक्नुहुन्छ / यात्रा संकर. र म यो आशा बारे अविश्वसनीय उत्साहित छु.
"तपाईं BTC पहिले Invest गर्नै पर्ने ...
अघिल्लो पोस्ट:बेल्जियम कर अख्तियार गर्ने विदेशी गुप्त आदानप्रदान प्रयोग करदाताओं लागि देख छ
अर्को पोस्ट:लहर WINS 16%, कोइनबेस सबै आँखाहरु
मार्च 7, 2018 मा 4:19 AM
Jody Senato भन्छन्:
सक्छ 7, 2018 मा 7:47 AM
अगस्ट 13, 2018 मा 8:21 PM
अक्टोबर 28, 2018 मा 1:32 AM